နေအိမ် / ad hoc အနုညာတစီရင် / ထိပ်တန်း 10 သာ. ကောင်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင် Clauses မူကြမ်းရေးဆွဲရေးများအတွက်သိကောင်းစရာများ
သင့်ရဲ့စာချုပ်နိုင်ငံတကာခုံသမာဓိဝါကျရေးဆွဲအစကတည်းကနေရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်တူပုံပေါ်. များစွာသောဥပမာအွန်လိုင်းရှိပါတယ် – သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်ရှိသမျှအားလုံးနီးပါး template ကိုယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်, မိတ္တူ / က paste နှင့်သင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်. သို့သျောလညျး, ဤစကားမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်?
အနုညာတစီရင်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုမြန်ဆန်အဖြစ်စဉ်းစားသည်, စျေးနှုန်းချိုသာခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းမှနှိုင်းယှဉ်လျှင်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းနည်းလမ်းကပိုလျှို့ဝှက်. ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီခုံသမာဓိလုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ခံအခြေခံလျှင်သာမှန် – ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်သဘောတူညီချက် – စနစ်တကျရေးဆွဲနေသည်, ခိုင်လုံသောနှင့်အတည်ပြု. အဆိုပါပါတီများဆုံးဖြတ်၎င်းတို့၏သဘောတူညီချက်မှတဆင့်ခုံသမာဓိမှ၎င်းတို့၏အငြင်းပွားမှုတင်သွင်းဖို့သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မသာဖော်ပြပေမယ့်လည်းသူတို့လိုအပ်ရန်ဆန္ဒရှိနေတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ရှုထောင့်ကိုသတ်မှတ်. တစ်ဦးနောက်ဆုံးမှာအတည်ပြုဆုရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်, ဒီပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း – တစ်ဦးစနစ်တကျရေးဆွဲခုံသမာဓိသဘောတူညီချက်အလွန်အရေးပါသည်. ဤဆောင်းပါးသည်တို့ပါဝင်သည်နှင့်သင့်ကန်ထရိုက်အတွက်ခုံသမာဓိဝါကျရေးဆွဲတဲ့အခါမှာအာရုံစိုက်ဖို့ရာပေါ်တစ်ဆယ်အကြံပေးချက်များကိုထောက်ပံ့ပေး.
1. ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် Express ကိုသဘောတူညီချက်
အဆိုပါပါတီများခုံသမာဓိမှ၎င်းတို့၏အငြင်းပွားမှုတင်သွင်းဖို့သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်ဖော်ပြအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. အသုံးပြုတဲ့ဘာသာစကားဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်- သို့မဟုတ်ပေမယ့်အစား "ရကြလိမ့်မည်" သို့မဟုတ် "လိမ့်မည်" ကဲ့သို့တရားဝင်စည်းနှောင်တာဝန်ဝတ္တရားဖော်ပြသောစကားများကိုသုံးပါ "မယ်" "ဖြစ်နိုင်သည်" နဲ့တူခွင့်ပြုချက်အသုံးအနှုန်းလုံးဝအသုံး. သင်ကခုံသမာဓိမဖြစ်မနေသို့မဟုတ် optional ကိုရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ချင်တယ်.
2. Institutional သို့မဟုတ်အကြားကိုရွေးချယ်ပါ သင့်ရာကို ခုံဖှဲ့။ စီရငျဆုံးဖွတျခွငျး
ဒုတိယခြေလှမ်းအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဒါခေါ်သို့မဟုတ်အကြားရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ပါတယ် သင့်ရာကို ခုံဖှဲ့။ စီရငျဆုံးဖွတျခွငျး. အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာများတွင် (ထို့အပြင်အုပ်ချုပ်ကိုခေါ်) ခုံဖှဲ့။ စီရငျဆုံးဖွတျခွငျး, အဆိုပါပါတီတရားစွဲဆိုမှု၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရှုထောင့်နှင့်အခြားလက်တွေ့ကျတဲ့ကိစ္စရပ်များအတွက်သူတို့ကိုကူညီတံ့သောကာခုံသမာဓိအဖွဲ့အစည်းကိုရွေးချယ်ပါ. တချို့ကဘုံဥပမာစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနိုင်ငံတကာကုန်သည်ကြီးများအသင်းများမှာ (ICC က), အနုညာတစီရင်၏လန်ဒန်တရားရုံး (LCIA), အနုညာတစီရင်၏အမြဲတမ်းတရားရုံး (အဆိုပါ PCA), စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစတော့ဟုမ်းကုန်သည်ကြီးများအသင်း (SCC), စင်္ကာပူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ရေးစင်တာ (SIAC) နှင့်ဟောင်ကောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ရေးစင်တာ (Hiace). အဓိကခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြား၏တစ်ဦးကအပြည့်အဝစာရင်းဝင်ရောက်စေခြင်းငှါ ဒီမှာ. ဤသည်အကူအညီဖလှယ်ဘို့သေးငယ်တဲ့ကြေးဖြစ်ပါတယ်. သင့်ရာကို ခုံဖှဲ့။ စီရငျဆုံးဖွတျခွငျး, သို့သော်ငြားလည်း, အဆိုပါပါတီများလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်သောအဓိပ္ပာယ်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပါသည် (နှင့်တာဝန်) သူတို့ဆန္ဒရှိအဖြစ်တစ်ခုလုံးကိုခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုစီစဉ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်. ဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိအဖွဲ့အစည်းရှိပါတယ်, သို့သော်လိုအပ်နေတုန်းပဲရှိသေး၏ (ကာထောက်ခံချက်) အဆိုပါပါတီများတတိယသတ်မှတ်ဘို့, ကြားနေပါတီ (တစ်ဦး "ခန့်အပ်ခွင့်အာဏာ" အဖြစ်လူသိများ) အဆိုပါပါတီများကသဘောတူရန်ပျက်ကွက်လျှင်ခုံသမာဓိလူကြီးများရွေးချယ်ခြင်းအပေါ်နောက်ဆုံးစကားလုံးရှိသည်, မကြာခဏအမှုဖြစ်သကဲ့သို့.
တတိယအရေးအပါဆုံးခြေလှမ်းခုံသမာဓိစည်းမျဉ်းများသတ်မှတ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမူဘောင်များအတွက်ပေးရာ. ခုံသမာဓိတစ်ဦးပြည့်စုံတစ်စုံကိုရှေးခယျြခွငျးအားဖွငျ့ပါတီတရားစွဲဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှုထောင့်တို့အပေါ်မှာသဘောတူရန်ရှိခြင်းကနေသူတို့ကိုယ်သူတို့ကယ်တင်ပြီအုပျခြုပျ, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတစ်ခုံသမာဓိ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှုထောင့်အုပ်ချုပ်ရသောစည်းမျဉ်းများတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောအစုဖြစ်ကြပြီးကြိုးစားခဲ့နှင့်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြပြီးကတည်းက. တစ်ခုချင်းစီကိုအဖွဲ့အစည်းကသူတို့ကန်ထရိုက်ထဲမှာထည့်သွင်းရန်ဆန္ဒရှိသောပါတီများအဘို့အကြံပြုတဲ့မော်ဒယ်အပိုဒ်ရှိပါတယ်. ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းများ၏အကြံပြုမော်ဒယ်ဝါကျ၏ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းရရှိနိုင်ပါသည် ဒီမှာ နှင့်ပါတီများပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒါဟုခေါ်တွင်ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်အကြံပြုဝါကျတွေထဲကထည့်သွင်းရန်အားပေးတိုက်တွန်းကြသည် “ရောဂါဗေဒ” နှင့်မပြုနိုင်ဝါကျ. ဖြစ်လာခဲ့လျှင် သင့်ရာကို ခုံဖှဲ့။ စီရငျဆုံးဖွတျခွငျး, ပါတီများအများအားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဥပဒေအပေါ်ကုလသမဂ္ဂကော်မရှင်ကတီထွင်ခုံသမာဓိစည်းမျဉ်းများသတ်မှတ်ရှေးခယျြ ("UNCITRAL စည်းကမ်းများ"), အထူး Non-အုပ်ချုပ်ခုံသမာဓိတွေအတွက်အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားတဲ့အရာ.
ခုံသမာဓိ၏ထိုင်ခုံ (လည်းခုံသမာဓိ၏နေရာတစ်ခုအဖြစ်လူသိများ) ကခုံသမာဓိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအုပ်ချုပ်ပညတ္တိကျမ်းဆုံးဖြတ်သည်အဖြစ်အလွန်အရေးပါသည် (လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒ, Lex သို့မဟုတ်ဒိုင်လူကြီး). ပါတီများတစ်ဦးကြားနေရာအရပ်ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်, ဥပမာသူတို့များသောအားဖြင့်ဒေသခံတရားရုံးများအများဆုံးဖွယ်ရှိသဘောတူညီချက်ပြဋ္ဌာန်းရန်နှင့်ခုံသမာဓိဖြစ်စဉ်ကိုထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ်ရာအရပ်ကိုရှေးခယျြ, ထိုကဲ့သို့သောပဲရစ်အဖြစ်, ဂျီနီဗာသို့မဟုတ်လန်ဒန်. ခုံသမာဓိ၏ထိုင်ခုံရွေးချယ်မှုအရေးကြီးသောဥပဒေရေးရာအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်ကတည်းကဒါပါတီများကိုအထူးအာရုံစိုက်သင့်ခုံသမာဓိ၏ juridical နေရာဖြစ်သည်. အထွေထွေစည်းမျဉ်းအဖြစ်, ယင်းပါတီများအစဉ်အမြဲရန်လက်မှတ်ရေးထိုးသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်နေရာတစ်နေရာကိုရှေးခယျြသငျ့သညျ 1958 အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ဆုပေးပွဲ၏အာဏာတည်ခြင်းအပေါ်နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်း (က "နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်း") နှင့်သူ၏နိုင်ငံတော်ဥပဒေကိုခုံသမာဓိ၏ယေဘုယျအားထောက်ခံဖြစ်ပါသည်.
5. အနုညာတစီရင်၏ Scope defining
ဂရုတစိုက်အဖြစ်ကောင်းစွာခုံသမာဓိ၏အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ဖို့သေချာပါစေ. သင်တို့ရှိသမျှသည်အငြင်းပွားမှုများသဘောတူမဟုတ်လျှင်, တရားမျှတမှုမရှိခြင်းတောင်းဆိုမှုများနှင့်အခြားအပို-သဘောတူထားသောကုစားအပါအဝင်, စာချုပ်ထဲကနှင့်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးမှပေါ်ထွက်လာသော arbitrated ခံရဖို့ရှိပါတယ်, ခုံသမာဓိမှတင်သွင်းခံရဖို့မရှိကြသည့်အငြင်းပွားမှုများကိုဖယ်ထုတ်ရန်သေချာစေပါ. ထိုင်ခုံ၏တရားအကြောင်းကိုကြောင့်အတိအလင်း inarbitrable အဖြစ်အချို့သောဘာသာရပ်ကိစ္စရပ်များနှင့်အငြင်းပွားမှုများချန်လှပ်ခြင်းရှိမရှိသတိထားပါ (ထိုကဲ့သို့သောအများဆုံးတရားစီရင်မှုအတွက်မိသားစုဥပဒေကဲ့သို့).
6. အုပျခြုပျရေးဥပဒ Define
အဆိုပါပါတီများကိုလည်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ဥပဒကိုသတ်မှတ်သင့်ပါတယ် (ထို့အပြင် "ထိရောက်သောတရား" အဖြစ်လူသိများ) ပုံမှန်အားဖြင့်ခုံသမာဓိအပိုဒ်ကနေသီးခြားအပိုဒ်ထွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့. စာချုပ်ရန်အအုပ်ချုပ်ခွင့်ဥပဒေခုံသမာဓိဥပဒပါသို့မဟုတ်ခုံသမာဓိအုပ်ချုပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါပါတီများအတိအလင်းကြောင့်တူညီတဲ့ဥပဒေဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသဘောတူခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်း, အုပျခြုပျရေးဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပညတ်တရား၏လက်မှကွဲပြားခြားနားဖြစ်ဘို့ကအတော်လေးဘုံဖြစ်ပါသည်.
သတိထားထည့်သွင်းစဉ်းစားလည်းခုံသမာဓိရုံး၏ချိန်း၏ထုံးစံအားပေးပြီးမှရပါမည်(s ကို) နှင့်ခုံရုံး၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ. ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏အများစုအတွက်, တရားစွဲဆိုမှုတဦးတည်းခုံသမာဓိရုံးမတိုင်မီဖြစ်ရလိမ့်မည် (တစ်ဦးတစ်ဦးတည်းသောခုံသမာဓိ) ဒါမှမဟုတ်သုံးအဖွဲ့ဝင် panel က (တစ်ခုအနုညာတခုံရုံး). အဆိုပါအရေအတွက်သည်မည်သည့်အဖြစ်အပျက်အတွက် Non-ပင်ဖြစ်သင့်သည်. ခုံသမာဓိလူကြီးအရေအတွက်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်ခုံသမာဓိ၏ကြာချိန်တခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် (သုံးခုံသမာဓိလူကြီးတဦးတည်းခုံသမာဓိရုံးထက်ပိုမိုစျေးကြီးဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်အာဏာရထုတ်ပေးမှကြာကြာယူစေခြင်းငှါ). အဆိုပါခုံသမာဓိအပိုဒ်အတွက်ခုံသမာဓိလူကြီးများ၏အရေအတွက်ကိုသတ်မှတ်ပေးရန်မလိုအပ်သောကြောင့်. အငြင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်တစ်ချိန်ကပါတီများဤပြဿနာဆုံးဖြတ်ခြင်းတစ်ခု option ရှိသည်နေစဉ်, ဒီချဉ်းကပ်မှု၏အဓိကအားနည်းချက်ကတော့ယင်းပါတီများခုံသမာဓိလူကြီးများ၏အရေအတွက်အပေါ်သဘောမတူလျှင်ကြောင့်, ဒီခြုံငုံတရားစွဲဆိုမှုမှမလိုအပ်သောနှောင့်နှေးခြင်းများဖြစ်ပေါ်.
တစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာခုံသမာဓိ၏အမှု၌, အများအပြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုခုံသမာဓိလူကြီးခန့်အပ်အပေါ် default အနေနဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပေး. သို့သျောလညျး, တစ်ဦးအတွက် သင့်ရာကို ခုံသမာဓိကရွေးချယ်ရေးနှင့်ခုံသမာဓိလူကြီးများအစားထိုးများအတွက်နည်းလမ်းတည်ထောင်ရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်. ပျက်ကွက်ထိုကဲ့သို့သောတိကျတဲ့ပြဌာန်းချက်, အငြင်းပွားမှုပျေါထှနျးထားပြီးတခါပါတီများခုံသမာဓိလူကြီးအပေါ်သဘောတူရန်အဘို့အခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကခုံသမာဓိ၏အရပျမှာတရားရုံးများလိုအပ်သောချိန်း / အစားထိုးစေရန်အတွက်ခြေလှမ်းဖို့ရှိစေခြင်းငှါ. အဆိုပါ UNCITRAL စည်းကမ်းများအောက်မှာ, အမှုအတွက်ပါတီများရက်ချိန်းအခွင့်အာဏာကိုမသတ်မှတ်ထားခဲ့ကြ, ဒါကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ရက်ချိန်းအခွင့်အာဏာ designates သူကိုအနုညာတစီရင်၏အမြဲတမ်းတရားရုံး၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှု၏ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ, ပါတီများသာအကောင့်ထဲသို့စာချုပ်၏ဘာသာစကားကိုဒါပေမယ့်လည်းဆက်စပ်စာရွက်စာတမ်းများကိုယူမထားသင့်. တဦးတည်းဘာသာစကားရွေးချယ်ရာတွင်အမြဲမျိုးစုံရွေးချယ်စရာမှပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းမှတ်ချက်. ဒါကတစ်ဦး optional ကိုဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါပါတီများ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသဘောတူညီချက်နှင့်မရှိခြင်း, အဆိုပါခုံသမာဓိလူကြီးအဆိုပါခုံသမာဓိ၏ဘာသာစကားကိုအပေါ်ဆုံးဖြတ်ရန်အဘို့အက.
10. ဖျန်ဖြေခြင်း / ညှိနှိုင်းမှု- multi-tier အနုညာတစီရင် Clauses
multi-tier ခုံသမာဓိဝါကျ - စေ့စပ်ဖြန်ဖြေပေးရာ, စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုသို့မဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းအချို့နဲ့အခြားပုံစံ (ADR) ခုံသမာဓိစတင်နိုင်ရန်ကြိုတင်ယနေ့ခေတ်ရေးဆွဲခုံသမာဓိဝါကျတစ်ခုမကြာခဏအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း. ပါတီများ lengthier နှင့်ပိုပြီးစျေးကြီးခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုအတွက်ပါဝငျမတိုင်မီ၎င်းတို့၏အငြင်းပွားမှုများ၏အခြေချညှိနှိုင်းရန်ကြိုးစားရန်အဘို့အဒါဟာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်, ဒါကြောင့်လည်းရိုးရှင်းစွာအချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များတဲ့စွန့်ပစ်စေခြင်းငှါပေမဲ့. Multi-tier ဝါကျအပါအဝင်တဲ့အခါမှာအကောင့်သို့ယူအရေးပါသောပြဿနာကြောင့်မဖြစ်မနေသို့မဟုတ် optional ကိုရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါပါတီများထိုကဲ့သို့သော "လိမ့်မည်" အဖြစ်မဖြစ်မနေအသုံးအနှုန်းသုံးလျှင်, ဖျန်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမှပြန်လည်ကုခုံသမာဓိများအတွက်အခွအေနေထုံးတမ်းစဉ်လာပင်ဖြစ်သည်. ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်ကအငြင်းပွားမှုခုံသမာဓိမှတင်သွင်းနိုင်သည့်ထက်ကျော်လွန်သည့်အကဲဆတ်သောအချိန်ကန့်သတ်ထည့်သွင်းရန်အလွန်အရေးပါသည်. အဆိုပါပါတီများထိုကဲ့သို့သော "မေလ" အဖြစ်အသုံးအနှုနျးကိုသုံးလျှင်, ဒီစေ့စပ်ဖြန်ဖြေသို့မဟုတ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုသာရွေးချယ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုနိုင်ပြီးပါတီများအဖြစ်မကြာမီအငြင်းပွားမှုပျေါထှနျးခဲ့သကဲ့သို့ခုံသမာဓိနှုနျးစေခြင်းငှါ.
အခြို့သောအနုညာတစီရင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို built-in လျှို့ဝှက်ချက်များပြဌာန်းချက်များကို. သို့သျောလညျး, အဆိုပါပါတီများအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်ဖျက်မှုအတွက်အမြန်လျှို့ဝှက်ချက်များတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ကုစားထည့်သွင်းရန်အားပေးတိုက်တွန်း, အားလုံးမဟုတ်ခုံသမာဓိဝါကျလျှို့ဝှက်ချက်များလိုအပ်နှင့်ခုံသမာဓိအများအပြားထိုင်ခုံ၏ဥပဒေများဖြစ်စေဒီမလိုအပ်ပါဘူးကတည်းက. ဒီတာဝန်များ၏နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည် – အဆိုပါခုံသမာဓိ၏တည်ရှိမှု၏ထုတ်ဖော်ထံမှ, စာရွက်စာတမ်းများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များမှ, သက်သေအထောက်အထားဒါမှမဟုတ်ပါတီများနှင့်ခုံရုံးနှင့်ကြားဖြတ်အစိုးရနှင့် / သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးဆုအကြားမည်သည့်စာပေးစာယူ.
ဤစာရင်းတွင်ပြည့်စုံစေ့စပ်မဟုတ်ပါဘူး - နှင့်ပါတီများအကောင့်သို့ယူရန်ဆန္ဒရှိစေခြင်းငှါ, သောအခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနှင့် optional ကိုဒြပ်စင်ရှိပါတယ်. တွင် 2010, နိုင်ငံတကာဘားအစည်းအရုံးရေးဆွဲရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင် Clauses များအတွက် IBA လမ်းညွှန်ချက်များထုတ်ဝေ, ဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်, ခုံသမာဓိဝါကျရေးဆွဲရေးနှင့်အငြင်းပွားမှုပျေါထှနျးထားပြီးတခါသငျသညျခုံသမာဓိမှအပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်းခိုင်လုံသောနှင့်အတည်ပြုအပိုဒ်လည်းမရှိသေချာအောင်ဖို့ပြည့်စုံလမ်းညွှန်ပေးသောဖြစ်ပါသည်.
နီနာ Jankovic, Aceris ဥပဒေ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေခိုင်မြဲသော